Blackmagic ဒီဇိုင်းသည် DaVinci Resolve 16.1 ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ DaVinci 16.1 ဖြေရှင်း
Fremont, CA, USA သို့ - ကြာသပတေးနေ့, 8 သြဂုတ်လ 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ DaVinci 16.1, ကုမ္ပဏီရဲ့လူကြိုက်များပြင်ဆင်ရန်, အရောင်, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများနှင့်ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးအယ်ဒီတာဖန်တီးကူညီပေးဖို့သစ်ကိုဖြတ်စာမကျြနှာကိုအဓိကမွမ်းမံမှုများပါဝင်သောအသံဖိုင် post ကိုထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအသစ် update ကိုဖြေရှင်းကြေညာခဲ့သည်။
DaVinci 16.1 အများပြည်သူ beta ကိုမှယခု download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း website က။
စဉ် Blackmagic ဒီဇိုင်း ငါတို့သည်လည်းဆန်းသစ်သော features အသစ်ရှိကြောင်း DaVinci ဖြေရှင်းရန် 16.0 ၏အသစ်တစ်ခုကိုအများပြည်သူ beta ကိုမိတ်ဆက်နေကြတယ်, DaVinci ၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိ 16.1 ဖြေရှင်းကြေညာသည်။ ဤသည်အသစ်သောအများပြည်သူ beta ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်သောအတွေးအခေါ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ပါစေဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကအစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျအလုပျလုပျဖို့မှန်ကန်တဲ့လမ်းအတွက်မွမ်းမံနေကြသည်သေချာစေရန်ဖောက်သည်များနှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာ့ feature ကိုရုပ်ရှင်ထဲကအများစုဟာအဘို့အ DaVinci ဖြေရှင်းရန်သုံးကြောင်းကြီးမားသောရုပ်ရှင်စတူဒီယိုသူတို့ရဲ့စနစ်တွေလာမယ့်ပရိုဂရမ်းမင်းရာသီမစတင်မီ updated ရနျလိုအပျသကဲ့သို့ပင်, ဒီသစ်ကိုအများပြည်သူ beta ကိုပေးနိုင်ပါတယ် Blackmagic ဒီဇိုင်း DaVinci ဖြေရှင်းရန်တစ်ချောနှင့်ကောင်းစွာစမ်းသပ်ပြီးလွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သူအကြီးစားစတူဒီယိုဘို့နှောင့်နှေးစေခြင်းမရှိဘဲအသစ်သောအတွေးအခေါ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်။ အသစ် features တွေကျနော်တို့ကကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးအယ်ဒီတာလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ထားတဲ့အများစုသစ်ကိုဖြတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖောက်သည်သိသိသာသာရှုပ်ထွေးသောအလုပ်အတွက်အချိန်တစ်ဝှမ်းစုစုပေါင်းအလှည့်ကိုလျော့ချဖို့ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းဘင်အတွက်အပြောင်းအလဲများယခုဖောက်သည်အမျိုးမျိုးသောဖိုလ်ဒါထဲမှာမီဒီယာနေရာနှင့်အရင်းအမြစ်တိပ်အတွက်ကလစ်များကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုခဲ့ခံရခြင်းမှဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုခွဲထုတ်, ထပ်တူပြုခြင်းဘင်သို့မဟုတ်ထပ်တူပြုခြင်းဝင်းဒိုးကိုမှခွင့်ပြုပေးပါသည်။ clips လက်ရှိအဆင့်ကိုအောကျတှငျအပေါငျးတို့သဖိုလ်ဒါတွင်တွေ့မြင်မည်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်ဘင်အတွက်အဆင့်ဆင့်န်းကျင်သွားလာသကဲ့သို့, အရင်းအမြစ်တိပ်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့စီမံကိန်းတွင်ဖိုလ်ဒါကိုရွေးချယ်ခြင်းဘို့တောင် menu ကိုရှိပါတယ်။
ဒီအများပြည်သူ beta ကိုထည့်သွင်းရမည်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် feature ကိုသစ်ကိုစမတ် Indicator ဖြစ်ပါတယ်။ DaVinci အတွက်အသစ်ညှပ်စာမျက်နှာ 16 အယ်ဒီတာတစ်ဦးပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အကူးအပြောင်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုလားဘယ်မှာခန့်မှန်းပြီးတော့ကြောင့်အတိအကျတည်နေရာပေါ်အချက်များနှင့်ထွက်အားမရ၏လဟဿအချိန်မရှိဘဲလျှောက်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အရာအလုပ်မျိုးစုံကိုအသစ်သောစမတ် features တွေ, မိတ်ဆက်ဖြေရှင်း အဆိုပါဗီဒီယိုအပိုင်းများကို။
ဆော့ဖ်ဝဲအယ်ဒီတာလုပ်ဖို့လိုလားသောအရာကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဖွင့် inset ပြင်ဆင်ရန်ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနီးကပ်ဆုံးအယ်ဒီတာအဆိုပါ CTI ထားရှိထားပြီးဘယ်မှာဖို့ပြင်ဆင်ရန်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းထည့်ခြင်းဖြင့်မဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာကြောင့်ဆော့ဖ်ဝဲပြုပါလိမ့်မယ်အရာကိုသိရန်နှင့်ထိုသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုနေရာသို့မဟုတ်သို့ clip လိုပြင်ဆင်ရန်ခဲယဉ်းသည်အဘယ်မှာရှိရှုပ်ထွေးသောတည်းဖြတ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည် DaVinci ဖြေရှင်းရန်တည်းဖြတ်နှင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာပေါ်အဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်ချက်အရဒါသစ်ကိုစမတ်ညွှန်ပြချက်အချိန်ဇယားထဲမှာသေးငယ်တဲ့အမှတ်အသားကိုထောက်ပံ့ပေးနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ အချိန်ဇယားန်းကျင်အယ်ဒီတာရွေ့လျားအဖြစ်အသစ်စမတ်ညွှန်ပြချက်အဆက်မပြတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ updates များကို။
မေတ္တာရပ်ခံအသုံးအများဆုံးတုံ့ပြန်ချက်ပစ္စည်းများကိုတအချိန်ဇယားထဲမှာကလစ်ပ်ဖြတ်ဖို့ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်းခဲ့, ယခု DaVinci 16.1 ဖြေရှင်း user interface ကိုတစ်ဦးဖြတ်ကလစ်အိုင်ကွန်လည်းပါဝင်သည်နှင့်ရိုးရှင်းစွာပေါ်မှာကလစ်နှိပ်ခြင်းဟာ CTI အမှတ်မှာအချိန်ဇယားထဲမှာကလစ်များလှီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကလစ်များချက်ချင်းဖြတ်ကြသည်တဦးတည်းခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်, နှင့်ဝသကဲ့သို့သုံးစွဲဖို့မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာပါပဲ။
အကွိမျမြားစှာအပြောင်းအလဲများကိုလည်းအယ်ဒီတာများအားလုံးအလိုအလျှောက်, အမှတ်တစ်ခုအဘို့အမဲကြသောအခါအလုပ်တစ်ခုနှေးကွေးမည်သည့်ရှာဖွေမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါ်တွင်သစ်တစ်ခုရသပ္ပါယ်စာစောင်ကိုအင်္ဂါရပ်များအပါအဝင် Editor ကို Keyboard ကိုဖြေရှင်းသစ်ကို DaVinci စေပြီ။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှချုံ့ခြင်းခလုတ်တည်းဖြတ်စာမျက်နှာအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကဲ့သို့တူညီသောတံဆိပ်များမှအမည်ပြောင်းပြီ, သူတို့အတွက်ကိုချုံ့ထွက်ကိုချုံ့, အကူးအပြောင်းကြာချိန်အတွက်ချော်ထွက်ချော်ဖို့ပြောင်းထားပါတယ်။ ကီးဘုတ်၏ထိပ်တလျှောက်တွင်အဆိုပါ function ကိုသော့ယခုအမျိုးမျိုးသောတည်းဖြတ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘို့သိမ်းယူနှင့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
တိုက်ရိုက်ကီးဘုတ်ပေါ်ဆက်ကပ်အပ်နှံသော့ကနေဝင်ရောက်တည်းဖြတ်ပိုအမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြု function ကိုသော့အပေါ်နောက်ထပ်ပြင်ဆင်ရန်မော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါ F4 သော့နှင့်ဖိကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ရှာဖွေရေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလှည့် DaVinci ဖြေရှင်းရန်အတွက်အားလုံးအကူးအပြောင်းပုံစံများမှချက်ချင်းရွေးချယ်ရေးခွင့်ပြုအသစ်တစ်ခုအကူးအပြောင်း window ကိုလည်းရှိပါတယ်။ ရုပ်ပုံဆိုးကျိုးများအတွက်အမြန်ရုပ်ပုံလိုအပျသူဖောက်သည်များ F5 သုံးပါနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
တင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်နှင့်အတူပြပွဲတည်းဖြတ်သည့်အခါတခါတရံစဉ်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်ရန်တစ်နည်းနည်းပျင်းစရာရရှိသွားတဲ့နေရာကိုကြည့်ရှုရန်ပြင်ဆင်ရန်ကစားရန်အနည်းငယ်သာအချိန်လည်းရှိ၏။ DaVinci 16.1 ဖြေရှင်းမဆိုပစ်ခတ်ရှည်လျားလွန်းသည်နှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့တစ်ဦးကြည့်ရှုသူအဘို့အပျင်းစရာဘယ်မှာရှိလိမ့်မည်တပြင်လုံးကိုအချိန်ဇယားမီးမောင်းထိုးပြခံရဖို့ခွင့်ပြုအသစ်တစ်ခုကိုဘှားမွငျ Detector ကိုမိတ်ဆက်။ အဆိုပါပျင်းစရာ detector ရိုက်ချက်များအဖြစ်ကောင်းစွာဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်များမှာဘယ်မှာခုန်ဖြတ်တောက်မှုကိုလည်းပြသနိုင်ပါတယ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆက်မပြတ်အချိန်ဇယား၏အစိတ်အပိုင်းများဒါအယ်ဒီတာများအလုပ်အဖြစ် boring နှင့်၎င်းတို့၏ပြင်ဆင်ရန်ဖို့ရိုက်ချက်များ add ထားတဲ့သူတို့ငြီးငွေ့စရာဟုယူဆသောတည်းဖြတ်၏ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်တိပ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအဲဒီငြီးငွေ့စရာ detector အယ်ဒီတာများအချိန်ဇယားကစားခြင်းမရှိဘဲတည်းဖြတ်အများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သကဲ့သို့, ကြီးသောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ပျင်းစရာ detector တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအရင်းအမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
DaVinci ၏သြဇာအာဏာအရှိဆုံး features တွေတစ်ခုမှာ 16.1 ဖြေရှင်းသစ်ကိုထပ်တူပြုခြင်းဘင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်းဘင်အဆက်မပြတ်ကလစ်ပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့် sorts နှင့်ဖောက်သည်များလိုအပ်မှသာကလစ်များတွေ့သူတို့ကိုဖောက်သည်အပေါ်ဖြစ်ကြ၏အချိန်ဇယားထဲမှာအချက်ထပ်တူပြသ whicho ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်းဘင်ဖောက်သည်ထပ်တူပြုခြင်းအချိန်ဇယားထဲမှာရိုက်ချက်ကိုကလစ်ပ်များအတွက်ရွေးချယ်စရာဖောက်သည်များအဘယ်အရာကိုမြင်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ကင်မရာနံပါတ်နှင့်ကြည့်ရှုသူများကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားအားလုံးတစ်ပေါင်းစုံအမြင်အသွင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးရိုက်ကူးပေါ်ကင်မရာများကနေကလစ်ပ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်းဘင်ကိုရှာဖွေရက်စွဲနှင့် timecode ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းကလစ်များနှင့်ရိုးရိုး metadata ကို အသုံးပြု. နှင့်နေ့ရက်ကိုအချိန်ကင်မရာများသော့ခတ်အသုံးပြုပုံဖောက်သည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်းဘင်လုံးဝပေါင်းစုံကကင်မရာတည်းဖြတ်ပြီးစီးစေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ရုံအချိန်ဇယားတလျှောက် scroll နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဘင်အချိန်ဇယားကလစ်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းသာရိုက်ချက်များပြပေးလိမ့်မယ်။ ဖောက်သည်ကိုပင်အချိန်ဇယား၏အဆုံးကိုချွတ် scroll နှင့်ရိုက်ချက်များထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။ Editor ကို Keyboard ကိုဖြေရှင်းသည့် DaVinci သုံးပြီးတဲ့အခါ, ဖောက်သည်ရိုးရိုးကင်မရာအရေအတွက်ကကိုင်ထားနိုင်ပြီးတောင်မှပိုမြန်တည်းဖြတ်ရေးအောင်, အချိန်ဇယားသို့ကလစ် "တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ overwrite လို့" ကိုရှာဖွေရေးဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလှည့်။
အဆိုပါနီးစပ်တက်ပြင်ဆင်ရန်အင်္ဂါရပ်ယခု 16.1 ဖြေရှင်း DaVinci အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးယခုမကျြနှာကို detection နဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမကြင်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြလူတစ်ဦး၏မျက်နှာကိုတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးရိုက်ချက်ချဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ဖောက်သည် timecode မပါဘဲကင်မရာထဲကနေရိုက်ချက်သုံးပြီးများမှာလျှင်သစ်ကိုထပ်တူပြုခြင်းပြတင်းပေါက်မျိုးစုံကင်မရာများမှသူတို့ကိုမျိုးနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကလစ်ပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါထပ်တူပြုခြင်းပြတင်းပေါက် timecode နေဖြင့်ထပ်တူပြုခြင်းကို support ကြောင့်လည်းအသံကအားဖြင့်အသံနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းကလစ်ပ် detect နိုင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်ကလစ်များတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့ပြောပြနိုင်အောင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပြီသမျှသောဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုမီဒီယာရေကူးကန်ထဲမှာထပ်တူပြုခြင်းအိုင်ကွန်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်အသစ်ကစင့်ခ်င်းဒိုးကိုအသုံးပြုပြီးဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုထပ်တူပြုခြင်းထိုကဲ့သို့သောမျိုးစုံအရေးယူကင်မရာများအဖြစ် Workflows ထိုကဲ့သို့သောအရင်းအမြစ် overwrite လို့တည်းဖြတ်ရေးနှင့်အသစ်သောထပ်တူပြုခြင်းဘင်အဖြစ် features အသစ်တွေကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
"ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့တည်းဖြတ်ရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်လုံးဝအသစ်သောလမ်းကိုရောက်စေကြောင်းပိုပြီး feature အသစ်များရှိပါတယ်အဖြစ်ကျနော်တို့ကဒီ update ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟု Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ "ဒီ features အသစ်မတိုင်မီပြုမိခဲ့ဖူးဘူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတီထွင်ကြပါပြီအသစ်အတွေးအခေါ်များကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝအသစ်နှင့်မရောက်မီကြိုးစားခဲ့ဖူးသောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်ခံရဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်င်! "
DaVinci ဖြေရှင်းရန် 16.1 အင်္ဂါရပ်များ
နယူးအများပြည်သူ beta ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
နယူး updates များကိုအယ်ဒီတာများမီဒီယာများ၏ sorting တိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါ။
စမတ် Indicator သည်အသိဉာဏ်ပြင်ဆင်ရန် features တွေအဘို့အ UI ကိုတုန့်ပြန်ချက်ကထပ်ပြောသည်။
နယူးဖြတ်ကလစ် tool ကအချိန်ဇယားထဲမှာကလစ်ပ်၏လက်ငင်းဖြတ်တောက်ခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
DaVinci အပေါ်နယူးခလုတ်ကိုအပြောင်းအလဲများကို Editor ကို Keyboard ကိုဖြေရှင်း။
ပျင်းစရာ Detector စိတ်ဝင်စားမှုကင်းမဲ့သောအချိန်ဇယားဒေသများတွင်ပြသထားတယ်။
နယူး Sync ကို Bin ကိုစုစည်းလွယ်ကူရိုက်ချက်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ထပ်တူပြုခြင်းမီဒီယာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်ရန် mode ကိုယခုပိုကောင်းဘောင်ရိုက်ချက်များမှမကျြနှာကိုအသိအမှတ်ပြုမှုလည်းပါဝင်သည်ထပိတ်လိုက်ပါ။
နယူးထပ်တူပြုခြင်း window ကိုကလစ်ပ်၏လက်စွဲထပ်တူပြုခြင်း, သို့မဟုတ်အသံအခြေစိုက်ထပ်တူပြုခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
တည်းဖြတ်, အရောင်, Fusion နဲ့ Fairlight အသံစာမျက်နှာများတွင်အကွိမျမြားစှာနဲ့အခြားတိုးတက်မှုများ။
DaVinci 16.1 အများပြည်သူ beta ကိုမှ download ပြုလုပ်ယခုရရှိနိုင်ဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း web site ကို။
DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံ 16.1 ဖြေရှင်းအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ blackmagic blackmagic davinci သန်နိဋ်ဌာနျ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-08
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic RAW မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: Pixelworks TrueCut ပလက်ဖောင်းက "Bravest" ကိုရုပ်ရှင်ရုံကို Motion ဆောင်ကြဉ်း